We She Me: သူစိမ်းလိုပဲ ဆက်ဆံပါတယ်
| FLAGS: We
မဇနိ - 8/11/08, 11:03 PM
ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီး ဘယ်လိုပါလိမ့်လို့ ဆက်ဖတ်လိုက်တယ်။ ပို့စ်လည်းဆုံးရော ကောင်းလိုက်တဲ့ သဘောထားလေးတွေဗျာ။ အတုယူရမယ်လို့ တွေးမိလိုက်တယ်။
ဟုတ်တယ်နော် သူစိမ်းကို လေးလေးစားစား ဆက်ဆံသလို ဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ် အဲလိုဆက်ဆံတာ ကောင်းတယ်။
တယောက်ကိုတယောက် လေးစားမှုက အရေးကြီးတယ်နော်။
ဒါနဲ့ အမအကြောင်း အသစ်တွေတွေ့ရင် ပို့စ်တင်ပြီး လက်တို့ပါအုံးဗျ။
pandora - 8/12/08, 12:40 AM
ဟုတ်တယ်။ ကိုယ်တို့လည်း အဲဒီလိုဆန်ဆန်ပဲ။ သဘောတူတယ်။
Aung Kyaw - 8/12/08, 9:59 AM
Hello, I would like to invite you to join the Myanmar Wikipedia community.
Yu Wa Yi - 8/12/08, 11:31 AM
ကော်မန့် ကို တစ်မျက်နှာထဲမှာပေးလို့ ရတဲ့ကျွန်မလိုနောက်တစ်ဘလော့အဖြစ်လာလာ
သူစိမ်းလိုပဲနေပါတယ် ဆိုတော့မှ ကော်မန့် ဝင်ရေးမိသွားတယ်။ အိမ်ကတစ်ယောက်ကလေ ကျွန်မကို အီးမေးလ်ရေးတိုင်း Thank you. နဲ့ အဆုံးသပ်လေ့
ရှိလို့ ကျွန်မတို့ သူစိမ်းဆန်ပုံကတော့ရှားတယ်လို့ ထင်နေတာ။ သြော်..ခုတော့ ကိုအန်ဒီ
တို့ လည်းရှိပါသေးလားလို့ ။
nu-san - 8/12/08, 1:50 PM
Andy ပြောတော့လည်း ဟုတ်သလိုလိုရှိသားပဲ.. အမတော့ အဲဒီလို တခါမှ မတွေးမိဖူးဘူး။ ကို-- ကတော့ အမက တခါတလေ သူ့ကျေးဇူးကြောင့် အခုလိုနေရတာတို့ ဘာတို့ ပြောရင် မကြိုက်ချင်လှဘူး.. တစိမ်းဆန်သလိုပဲတဲ့လေ.. အခုလိုမျိုး လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို သိခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Andy နဲ့ ကလေးတို့ မေမေရေ.. :D
Ko Paw - 8/12/08, 1:56 PM
လင်မယားဆက်ဆံရေးသာမက လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ အတုယူမှတ်သားရမယ့်အချက်ပါ။
Anonymous - 8/12/08, 2:08 PM
သူငယ်ချင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက်အတော်ဖြစ်ခဲ့ရတာမို့ ဒီအဆိုကို အပြည့်အ၀အားပေးသွားပါတယ်။ ဆက်ဆံရေးမှာ Respect each other က ရေရှည်ခိုင်မြဲရေးအတွက် တကယ်ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။
khine - 8/12/08, 3:43 PM
Anonymous - 8/12/08, 4:00 PM
Anonymous - 8/12/08, 4:07 PM
I don't like this relation style.But I do agree to have respect bet each other.
I think we have tobfrank bet: couples.It's important to know each other's feeling.
Anonymous - 8/12/08, 6:07 PM
အကြိုက်ဆုံးထဲ ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်း) ဘာလို့လဲဆိုတော့ မပန်ကလည်း အဲလိုနည်း လိုက်နာတယ်ဆိုပဲ ။ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကိုအန်ဒီရော မပန်ရောက အိုကေမှာ စိုပြေနေကြတော့ ... ဒီနည်းနာလေးကို မှတ်တော့ မှတ်ထားလိုက်မယ် ။
အိုကေမှာ စိုပြေနေကြတဲ့ မခင်မင်းဇော် ၊ မမေငြိမ်း ၊ မကေတို့ကိုလည်း လာ ကွန်မန့်ခိုင်းဦးမယ် ။ သူတို့ဆီကလည်း စနည်းနာလိုက်ဦးမယ် အဟိ ။
လက်ခံကျင့်သုံးမယ် ဘာမယ် ဆိုတာကတော့ အဲလိုအခြေအနေရောက်လာမှ အားလုံးကို ပြန်သုံးသပ်ပြီး ၊ ကိုယ်လက်ခံနိုင်တာကို ယူမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့လေး)
But I agree with the underlying notion that we need to respect each other all the time and always try to find out the likes and dislikes of each other coz human beings are always changing over time and the experiences that we encounter. Our personalities never stay still.
Andy Myint - 8/12/08, 10:02 PM
အစ်မအကြောင်းကတော့ ရေးရင် ကုန်မှာ မဟုတ်ဘူး မဇနိရေ.. အဲဒါကြောင့် မရေးတော့ဘူး ... တိန်!
မပန်တို့က ဘိုဆန်ဆန်များရောလား စိတ်ကူးကြည့်မိတယ်။
I have already joined, Ko Aung Kyaw and am looking for good post. :)
ဟီးဟီး ... Thank you တဲ့လား မ Yu Wa Yi.
ဒီလို ကျေးဇူး သိတတ်တာလည်း သူစိမ်းတွေကိုမှလေ မနုစံ.. ကိုယ်နဲ့ အနီးဆုံး မိဘတွေ ဇနီးယောက်ျားတွေကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ရ ကောင်းမှန်း မသိကြဘူး။ အေးပေါ့ အဲဒီလိုကြီး ပြောလာတော့ ကျွန်တော်ဆိုလည်း နေတတ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကို--ကြီးလိုပဲ ပြန်ပြောမှာပဲ။ နှစ်ယောက်စလုံး မှန်တယ်.. ဟဲဟဲ။
ဟုတ်တယ် ကိုပေါ.. ကျွန်တော် အဲဒီလိုလည်း ဆိုလိုချင်တာ။
ဟုတ်တယ် ကျွန်တော် ပြောချင်တဲ့ သူစိမ်းလို ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာ Respect each other ကို ဆိုလိုတာပါ စာဖတ်သူ။
အားပေးတဲ့ ကျေးဇူးပါ မခိုင်။
ဟုတ်ပါတယ် စာဖတ်သူ။ အမြဲတမ်း ကိစ္စတိုင်းအတွက်တော့ မမှန်နိုင်ဘူးပေါ့။
ဟုတ်တယ် ကိုညီရေ။ ကျွန်တော်က စာဖတ်သူတွေကို Message ပေးချင်တာ ဆိုတော့ ဒီဟာကို ဖိရေးမှ ဖြစ်မှလေ။ အဲဒါကြောင့် ဒီအဆိုကို ပျက်စေမယ့်ဟာတွေကို တမင်တကာ ချန်ခဲ့တာ။ လင်နဲ့ မယား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ခင်ခင်မင်မင် ရှိရပါမယ်။ ဒါကတော့ လူတိုင်းသိနေတာမို့ Highlight လုပ်ချင်တာလေးကို စောင်းပေးပြီး ရေးလိုက်လို့ပါ။ အဓိက ပြောချင်တာတော့ အမြဲတမ်း Respect each other ဖြစ်နေစေချင်လို့ပါ။
အိမ်ထောင်သားမွေးမှ မဟုတ်ပါဘူး တီတီဂျစ်။ ကိုယ့်မောင်နှမတွေ၊ မိသားစုတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာပါ ခင်မင် လေးစားမှုကို အမြဲတမ်း ထိန်းထားနိုင်အောင်ပါ။ အပေါ်မှာ ကိုညီကို ရှင်းပြသလိုမျိုး ဒီတစ်ချက်တည်းတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွယ်။ တခြားအချက်လေးတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဂျစ်က Underlying noting ဆိုတာကို သိတယ်ဆိုတော့ ထပ် မရှင်းတော့ပါဘူး။
ဝေတိုး - 8/13/08, 2:51 AM
တူတယ်ဗျို့။ respect ကို "လေးစား"လို့ ယူတဲ့လူတွေက respect each other ကိုအချင်းချင်းဘာလေးစားစရာလိုလဲပြောတယ်။ အလေးထား လို့နားလည်တဲ့ကျမတို့က အချင်းချင်းပေမယ့် respect နဲ့ဆက်ဆံတာတော့ ကြိုက်ကြတယ်။ကိုAndy ဥပမာပေးတဲ့ ထမင်းဖိတ်ကျွေးတာ၊ ဖော့ဝေဖန်တာ၊ အချိန်လေးစားတာ၊ တွေတကယ်က any relationshipကြားမှာတကယ်အရေးပါတာလက်တွေ့ပဲ။ ၁၀ခါမှာ ၁၀ခါလုံး သူဖိတ်လို့လာရတဲ့ တဖွဲ့လုံး ကိုယ်ဝယ်သွားတာနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာချက်စားပြန်ရတဲ့ ဘော်ဘော်၊ asylum မခံ odd job မလုပ်ရင် ဒီမှာကျမတို့လမ်ဘေးရောက်မှာလို့ face to face သူပြောထွက်တာကိုယ်ကစိတ်မဆိုးရပဲ သူပြောသလိုမလုပ်လို့သူကဦးအောင်စိတ်ကောက်တဲ့အမဝမ်းကွဲ၊ မနက်၁၀နာရီလာမယ်ပြောပြီးည၁၂နာရီမှပေါက်ချလာတတ်တဲ့ အသိ တွေ ဒီPost ကိုဖတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့။
bOASTER - 8/14/08, 12:00 AM
ပီတိ - 8/14/08, 10:27 AM
မှတ်သားစရာပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးလိုက်နာဖို့ကောင်းတဲ့ အချက်လေးပါ။ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ ကိုအန်ဒီ…
မေငြိမ်း - 8/14/08, 7:21 PM
ကိုယ်တိုင် အဲလိုသဘောထားတာကို ကြိုက်ပေမဲ့ အမြဲမလိုက်နာဖြစ်.. မေ့မေ့သွားတယ်ဟီးးး။ သူနဲ့ကိုယ် သိပ်ပြေလည်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့.. တခါတခါ ဆိုးမိတယ်။ ခု ဒီpost လေး ဖတ်ရတော့ သတိထားဖို့ သတိရသွားတယ်.. ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျို့ ...
Andy Myint - 8/14/08, 9:59 PM
ဟုတ်တယ် မဝေတိုးရေ.. သူစိမ်းလို့သာ သဘောပြန်ထားလိုက်ပေါ့
Thanks, bOASTER. I think I know who you are :-)
အားပေးတာ ကျေးဇူး ကိုပီတိ
ဒီလိုနေဖို့ မလိုတော့လည်း ပိုလို့ကောင်းတာပေါ့ မမေငြိမ်းရယ်...
Nu Thwe - 8/29/08, 5:42 AM
ခုမှ ဖတ်မိတယ်။ သိပ်မှန်တာပဲ ကိုအင်ဒီ။ အရမ်းရင်းနှီးသွားတဲ့ လူတွေကြား အားနာမှု မရှိတော့ပဲ သည်းခံမှုကို အပိုင်တွက်တာ (taking it for granted) က တော်တော်လေး ပြဿနာ ပေးနိုင်ပါတယ်။ တဖက်သား အတော် ခံစားရစေတဲ့ အပြုအမူပါ။ ဆင်ခြင်ရမယ့်အထဲ ကျမလည်း ပါပါတယ်း) တွေးတတ်ရေးတတ်တဲ့ ကိုအင်ဒီကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Andy Myint - 8/29/08, 9:24 AM
မှန်တယ် ညီမနုသွဲ့။ ခင်မင်မှုကို မသိလိုက်ဘဲ Exploit မလုပ်ဖို့ သတိထားရတယ်နော်။
Mhaw Sayar - 9/8/08, 5:36 PM
ဒီပို့စ်ကတော့ အကြိုက်ဆုံးတွေထဲက တစ်ခုပါပဲဗျာ. :)
Andy Myint - 9/8/08, 9:47 PM
swezin - 11/25/08, 11:21 PM
very thoughtful! Thanks for sharing this.
zaw - 2/8/11, 12:52 AM
courtesy and respect is most important in family..
အိမ့်ချမ်းမြေ့ - 4/1/11, 11:58 AM
Kay - 8/7/11, 10:38 PM
Anonymous - 11/2/12, 2:58 AM
အင်တာနက်ထဲ စာတွေလိုက်ရှာဖတ်ရင်း အလည်ရောက်ခဲ့ပါတယ်..
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မိသားစုဘဝလေးမှာ အေးချမ်းသာယာခြင်းများစွာနဲ့
ဒီ Blog လေးအပါဝင် လေးစားအားကျစရာကောင်းတဲ့ Blog Post များစွာ..
မတူညီနိုင်သောဘဝနှစ်ခုကနေ တူညီနားလည်မှုတွေနဲ့ဘဝတစ်ခုအဖြစ် တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ စံပြမိသားစု ဘဝလေး ထာဝရသက်ဆုံးတိုင်ခိုင်မြဲပါစေ
လို့ဆုတောင်းပေးရင်း အားပေးခဲ့ပါတယ် ရှင်
Kay Kay - 12/11/13, 7:19 PM
အစ်ကို့ Post လေးကို သဘောကျလို့ Share ခွင့် ပေးပါနော်...
Anonymous - 4/5/14, 7:32 PM
ကောင်းလိုက်တာ ကိုAndy ရေ ရေးတဲ့ပိုစ့်လေးတွေအားလုံးအရမ်းကောင်းပြီး အရမ်းကြိုက်ပါတယ် သူစိမ်းလိုလေးကို ကူးထားပြီး ချစ်သူကိုပြရဦးမယ် ကျွန်မကျင့်သုံးသလိုသူပါကျင့်အောင်ပါ